Wararka | Jamaame News Network
Wararka ka imaanaayo magaalada gaywerrow iyo tuulooyinka hoos dhaca ayaa ah , kuwa aan marna loo dul qaadan Karin amase dhaafsan banii’aadannimo, muslinnimo. Walaalnimo, Soomaalinimo dhalasho warkeeda iskaba illow. Waxaa maalmihii Ciidul Adhxa , halka ay dadweynaha deggan magaaladaasi iyo tuulooyinka ku hareereysan ka dhaca dhibaatooyin fool xun, kuwaasi oo ka baxsan dadnimada amase sidaan kor kusoo xusney. Waxaa weerar ...
Waxaan si woda jir ah, halkaan ooga woda hambalyeyneyaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan. Wannu leennahay Ciid Wanaagsan Gaar ahaan dadka u dhashey gobolka Shabeellaha Hoose. Ilaahay waxaan ooga baryeynaa annaga oo ah odeyda jaaliyadda beesha Biimaal ee boqortooyada Sacuudiga inuu ooga dhigo mid ay badhaadha iyo bash bash oogu ciidaan. Halkaan waxaan si gaar ...
Jaaliyadda beesha Biimaal ee Jeddah ayaay soo dhex tilley kala duwanaan aragtiyo muddo dheer, taasi oo marba soo mareysey heer, ilaa muddo dhoor sano. Kala duwanaanta aragtida waa mid ku dhisan horumarka jiritaanka taariikhda, haddii aysan jirin kala duwanaan aragti lama heleen wax horumar ah dunida oo idil. Waxaase muhim ah , in la helo hab lagu mideeyo kala duwanaantaasi, ...
Shir ballaaran ay isiugu yimaadeen Jaaliyada Beesha Biimaal ee boqortooyada Sa’udi Arabia ayaa lagu
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa u xaqiijiyey warbaahinta Raaxoole in kolonyada ciidamada Amisom maqribkii shaley ku soo galbiyeen deegaanka
Deg Deg: Ciidamada Dowlada Oo Burburiyey Saldhig Alshabaab Ay Ku Lahaayeen Deegaanka Lexmooro. Ee Degmada Marka.
Ciidamada xoog dalka soomaaliya ee fadhigoodu yahay deegaanka Ceeljaale ayaa maalmahanba wada qorshe
Warark naga soo gaaray gobolka shabeellada Hoose ayaa sheegaya in dil wadareed naxdin Leh loo geystay shacab
Hambalyo Aroos Oo Soo Gaartay Warrbaahinta Raaxoole.
Waxaan halkan hambalo aroos farxad leh ugu direynaa walaalaha is calmaday calaf isku yeeshay, waa ayo waa kuma
Ceeljaale. Banaabax Lagu Taageeray Nabadii Uu Ku Baaqay Jarnal Waafow (Sawiro)
Banaabax balaaran ay isugu soo baxeen bulshada deegaan weynaha Ceeljaale ayaa lagu qabtay fgaarayaasha farasmagaalaha deegaanka Ceeljaale.